Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta : Messi, Dier, Ings, Winks, Moyes, Diallo
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa Kala iibsiga ee Maanta : Messi, Dier, Ings, Winks, Moyes, Diallo
Paris St-Germain u helno suurtogalnimada uu saxiixay Barcelona ayaa kubadsameeyaha Argentina Lionel Messi, 33, xagaaga. (ESPN)
Daafaca Tottenham iyo England Eric Dier, oo 26 jir ah, ayaa qirtay inuu diyaar u ahaa inuu ka tago kooxda ka hor inta uusan u wareegin wadnaha daafaca. (Boostada)
Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka kooxda Leicester Harvey Barnes, oo 22 jir ah, si ay ugu bedesho bedelkeeda ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer England iyo Jadon Sancho oo 20 jir ah oo u ciyaara Borussia Dortmund. (Cadceed)
Dhanka kale, Manchester United ayaa sidoo kale rajo ka helo ogolaansho shaqo for a Atalanta Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara sIvorian ‘Camcaad Diallo sidaas oo kale ayaa 18-sano jirkaan ayaa ku biiri karaa n January suuqa kala iibsiga. (Manchester Evening News)
Weeraryahanka reer England Danny Ings, oo 28 jir ah, ayaa ku booriyay inuu qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixo kooxda Southampton tababarihiisa Ralph Hasenhuttl, maadaama qandaraaskiisa haatan uu haysto 18 bilood. (Sky Sports)
West Ham ayaa diyaar u ah inay waqti dheer u sameyso tababare David Moyes. (Times, rukhsad loo baahan yahay)
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa diiday wararka sheegaya in kooxdiisa Man United ayna la jaan qaadi karin wuxuuna ku adkeysanayaa in saxiixyadiisa cusub ay ka caawin doonaan kooxda inay horumar sameyso. (Sky Sports)
Si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay u dhaqaaqi kartaa tababaraha Paris St-Germain Thomas Tuchel haddii ay ceyriso Solskjaer isbuucyada soo socda. (Bild, Jarmal)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Harry Winks, oo 24 jir ah, ayaa raadin kara inuu u dhaqaaqo bisha Janaayo si uu u xoojiyo aqoonsigiisa England ka hor Koobka Qaramada Yurub. (Mirror)
Manchester City ayaa qarka u saaran inay dhameystirto saxiixa 18 jirka reer Brazil ee kooxda Gremio Diego Rosa. (Manchester Evening News)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brighton Yves Bissouma oo 24 jir ah ayaa ka mid ah dhowr magac oo ay Liverpool u aragto bedelka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Georginio Wijnaldum oo 30 jir ah kaasoo lala xiriirinayo Barcelona. (Liverpool Echo)
Ciyaartoyda Arsenal ayaa hadalo xanaf leh is dhaafsaday kulan cadaan ah kadib markii tababare Mikel Arteta uu isugu yeeray kooxda si uu u cadeeyo sababaha keenay inay ku bilowdaan xilli ciyaareedka liita. (ESPN)
Arsenal ayaa soo nooleysay xiisihii ay u qabtay Istanbul Basaksehir ‘Ciyaaryahanka khadka dhexe sTurkish Berkay Ozcan, 22. (Transfermarkt)
Dhanka kale, William Saliba mustaqbalkiisa Arsenal wali lama hubo madaama ciyaaryahanka iyo kooxda aysan wali ku heshiin halka uu amaah ugu dhaqaaqayo 19 jirka reer France. (ESPN)
Jonathan Barnett, oo ah wakiilka weeraryahanka Wales Gareth Bale, ayaa noqday wakiilka rasmiga ah ee Rennes iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Eduardo Camavinga, 18-jirka lala xiriirinayo Manchester United iyo Real Madrid. (L’Equipe, Faransiis)
Sidoo kale wakiilada badalaya waa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Newcastle Sean Longstaff kaasoo heshiis la saxiixday ‘super wakiil’ Pini Zahavi, kaasoo u sheegay 23-sano jirka reer England inuu qarka u saaran yahay inuu u dhaqaaqo Tottenham hadii aan qandaraas cusub loo soo bandhigin St James. ‘Beerta. (Boostada)
Tababarihii hore ee Juventus iyo AC Milan Massimiliano Allegri ayaa sheegay inuu doonayo inuu maamulo Premier League. 53 jirkaan, oo lala xiriirinayo Manchester United iyo Arsenal, ayaa koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Juve xagaagii 2019. (Times, subscription required)
Maamulaha Sheffield United Chris Wilder ayaa meesha ka saaray in saxiixyo joogto ah la sameyn doono bisha Janaayo, laakiin wuxuu rajeynayaa inuu amaah kula soo wareego labo daafac The Blades ayaa lala xiriirinayay Manchester United Marcos Rojo, 30, Fulham’s Terence Kongolo, 26, iyo Preston’s Ben Davies, 25 (Sheffield Star)
Maamulaha Club Bruges Philippe Clement ayaa meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo weeraryahanka reer Tanzania ee kooxda Aston Villa Mbwana Samatta, 27-jir, laacibkii hore ee Genk oo haatan amaah ugu jooga Fenerbahce (Birmingham Mail)
Juventus ayaa lala xiriirinayay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Aston Villa Douglas Luiz, oo 22 jir ah (Tuttermercato, oo Talyaani ah)
Tababaraha Everton Carlo Ancelotti ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa uu ka filayo Cenk Tosun wuxuuna soo jeediyay in weeraryahanka Turkiga, 29, uu daqiiqado badan ku qaadan karo garoonka mustaqbalka dhow. (Liverpool Echo)
Tababaraha QPR Mark Warburton ayaa tilmaamay inuusan fiirin doonin inuu la soo wareego weeraryahan inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo taas bedelkeedana uu diirada saarayo daafac dhexe. (West London Sport)
Pep Guardiola ayaa ku rajo weyn in kabtanka kooxda Fernandinho, oo 35 jir ah, ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, uu door weyn ka ciyaari doono Manchester City inta udhaxeysa ilaa iyo xagaaga dambe. (Manchester Evening News)
Weeraryahanka reer Brazil ee kooxda Newcastle Joelinton, oo 24 jir ah, ayaa amaan kala dul dhacay tababare Steve Bruce wuxuuna aaminsan yahay in Magpies ay “soo jiidi karto” isreebreebka Yurub xilli ciyaareedkan. (Taariikhda Newcastle)
Manchester United ayaa rajeyneysa inay hesho ogolaansho ay dib ugu soo dhaweyso taageerayaasheeda Old Trafford kulankooda Premier League ee ay la ciyaarayaan Leeds dhamaadka bishaan – hadii Greater Manchester ay ka guurto Tier 3 ee xayiraadaha coronavirus ee dowlada UK ee England. (Telegraph)
Tottenham waxay raadineysaa caddeyn sababta ah astaanta dowladda buste ee awoodda taageereyaasha loogu dabaqo dhammaan goobaha ciyaaraha, iyadoon loo eegin cabirkooda. (Heerka Caawa ee London)
Kooxda League One ee Sunderland ayaa ku dhow inay u magacawdo tababarihii hore ee Bristol City iyo Oldham Lee Johnson oo 39 jir ah tababarahooda cusub. (Sunderland Echo)